Oh.. My Blog!: September 2007
အဲ့ဒါ ဆောင်းတွင်းပေါ့ နှင်းပွင့်လေးတွေတောင် တဖွဲဖွဲ ကျလာပြီ..
မနက်ဖွေးဖွေးမှာ မြူတွေ ရောရောထွေးထွေးမပါကြဘူး..။
နှင်းတွေကို တစ်ပွင့်စီ လှမ်းကောက်လို့
ငါဟာ နှင်းပွင့်နန်းတော်တစ်ခု ဖန်ဆင်း ပြစ်လိုက်တယ်
ညတွေဆို တလှပ်လှပ် လှုပ်ခတ်နေတဲ့ ဇာပုဝါခန်းစီးအနားမှာ
ပန်းတွေက လှလှပပ လရောင်လှုံနေတာလေ..
ဟိုးပြာလဲ့လဲ့ ကောင်းကင် ထဲက ငှက်ကလေးတွေ …
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျံသွားတာ မြင်လိုက်ရတုန်းကလည်း လှတာပဲ..။
အပြာရောင်ရယ် အဖြူရောင်ရယ် လရောင်ရယ်ပါ
ရေးချယ်ထားတဲ့ သက်တန့်တခုဟာ လှလှပပရှိလှရဲ့.
တိမ်မည်းမည်းစုပ်ချက်တစ်ခု သက်တန့်တွေပေါ် ထင်ကျန်သွားတဲ့အခါ
တလှပ်လှပ်ပုဝါတွေနဲ့ အတူ လွယ်လွယ်ကူကူ ပျက်စီးသွားပြန်ရော..။
ငှက်ကလေးတွေကလည်း ခရီးသွားတွေမို့ မမြင်နိုင်တဲ့နေရာထိ ပျံသန်းသွားကြသတဲ့.။
စိတ်ကူးထဲမှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ခေါက်သိမ်းထားတာ
ငါ့မှတ်ဥာဏ်တွေ မပျက်သေးသ၍တော့ ကျန်နေခဲ့ပါလိမ့်မယ်..။
အင်း... လသာပါရဲ့ တိမ်ကလာဖုံးသွားတာ
တတိယအကြိမ်မြောက်ဆိုမှတော့ ငါ မှောက်ရက်လှဲကျတာပေါ့..။
Posted by Tesla at 10:09 AM | Links to this post
My Recent Favorites (ONE)
သစ္စာနီ (English For All ဂျာနယ် ၂၀၀၀)
For that apple, there isabird.
For that bird, there isapair of wings.
For that pair of wings, there isacage.
I haveasheet of white paper.
For that paper, there isapoem.
For that poem, there are one hundred words.
For those one hundred words, there isahead.
When the words are given wings
A bird flies straight into the head.
On the table are left only
An apple on which nothing is written
Andasheet of paper withachunk bitten off.
( “English for All” journal – 2000)
Trans ; Zeyar Lin
Picture is from that link http://www.oyonale.com
Posted by Tesla at 12:55 PM | Links to this post
Happy birthday may u live toaripe old age!
Happy birthday May all ur wishes come true!
ဒေါ်ဂျီးပန်းး အသက် ၃၀ ပြည့်ပြီလား.. ဟဲဟဲ ပျော်ရွှင်ပါစေ..
ကိုတက်စ် ရေ.. Happy Birthday ပါ.. ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ..
Many Happy RETURNS for today and the year ahead!
ကိုကြီးတတ်.. အာဘွားးးးးး ဟက်ပီးဘက်ဒေးးးးးးးးးးး
Mr.Poohးး ကိုတက်စလာ - မွေးနေ့မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ရေးဖေါ်ဖတ်ဖက် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းတယ်။ :)
မောင်ပွတ်ရဲ့ခြူသစ်းး ကိုတက်ရေ..happy birthday ပါ ။ အမြဲပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေး)
မအိမ့်းး ပျော်ရွှင်ပါစေ.. ရေလိုမွှေး လို့ ပန်းလိုအေးပါစေ.. ဒါနဲ့ ဘယ်နှနှစ်ပြည့်တာလဲ... ၁၆နှစ်လား
ကိုAlvinးး Hay Ko Tesla... Happy Birthday! :)
ဘလာဂေါက်းး ကိုတက်စလာ- ဒီမွေးနေ့ကစပြီး နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်ငြိမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး ရေးဖော်ရေးဖက် သူငယ်ချင်းများနဲ့အတူ သုတ၊ရသနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့စာတွေ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေလို့ ကျွန်တော် ဒီနေရာကနေ ဆုတောင်းတယ်။
ကိုဖြိုး ကိုတက်တစ်ယောက် အခုလိုပဲ ထာဝစဉ် အမြဲပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ..
ကိုဇင်ကိုလတ်းး အဲဒီနေ့ကပေါ့ . . . လောကကြီး သာယာလှပ စိတ်ကူးတွေ မြူးကြွနေခဲ့တာ
အဲဒီနေ့ကပေါ့ . . . သူ့စိတ်တွေ အေးချမ်း ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းစေခဲ့တာ
အဲဒီနေ့ကပေါ့ . . . မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး မြှောက်လေတို့ တွန်ကြူးခဲ့တာ
အဲဒီနေ့ကပေါ့ . . . ကိုတက်စလာ တံခါးခေါက် ကမ္ဘာမြေကို ရောက်ခဲ့တာ
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ကိုတက်စလာ..
ကိုမောင်လှးး Happy Birthday Bro
ကိုကျော်ဇေယျးး ကိုတက်စ် နောင်နှစ်ပေါင်း တစ်ရာ့နှစ်ဆယ်တိုင် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံ နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်..
ပုံရိပ်းး ဟေး မွေးနေ့ဆို.....။ မုန့်စားမယ်!!!! ကောင်းသောမွေးနေ့ပါ ကိုတက် :)
မွေးနေ့ လက်ဆောင် ကျားတစ်ကောင်ဆို အကောင်၃၀။
zawburmaးး မင်္ဂလာ မွေးနေ့ပါ တက်စလာ
MoeMoeးး Happy Birthdayး Many happy returns and may you have many fabulous more birthdays.
Clonegal84းး Happy Birthday bro.wish u alldbest. and may all your wishes come true soon....
ကိုညီညီးး ကိုတက်စလာရေ.. ခဏနေပါဦးဗျ။ ကျွန်တော့် birthday wish လေးပါ ယူသွားပါဦး။ Happy Birthday ပါ။
မျက်နှာများတဲ့ကင်းကောင်းး ဒီနေမှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အိုးမိုင်ဘလော့ဂ် နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင် နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါသည်။ ကိုတက်ကြီး အောင်မြင်ပါစေ။
ဒေါင်းကြီးးး ဗျို့ တက်ကြီး ဟက်ပီး ဘက်ဒေး.. တက်စလာမင်းဝေ ၀ိညာဉ်ဝင်တဲ့နေ့.. ဒါမှမဟုတ် ပညတ်သွင်းပြီး ကံစီရင်မှုကို စတင်တဲ့နေ့..
ကိုနေဘုန်းလတ်းး အဲဒီ့နေ့က ... ငလျင်မလှုပ်ဘူး ... မိုးကြီးလဲမရွာဘူး ...
နောက် ... ထူးထူးခြားခြား ဘယ်လို ပန်းမျိုးမှလဲပွင့်မသွား ဘူး ... ဒါပေမယ့် ... အဲဒီ့နေ့မှာ တက်စလာ ဆိုတဲ့လူဖြစ်လာတယ် ... ရိုးရိုးလေးပါပဲ ... ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ရိုးရိုးလေး ဆိုတာကပဲ ... အခုအချိန်မှာ နောက်ပိုင်းမင်းသားကြီး အဖြစ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အ၀န်းအ၀ိုင်းလေးမှာ ဆန်းဆန်းပြားပြားလေး ဖြစ်လာတယ် ... ... ဒီလိုပါပဲ ... သာမာန်လူတွေရဲ့ သာမာန်ဖြစ်ရပ်လေးတွေနဲ့ပဲ သမိုင်းဟာ အသက်ဝင်နေခဲ့တယ် ...
ကိုစစ်းး Happy Birthday Ko Tes.. May all your dreams come true..
ကိုကြီးကျော် & ညလေးးး မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။ အသားလဲ ဒီ့ထက်တိုးလာပါစေ.. :P
မနိုင်းနိုင်းးး Happy Birthday :)
““နောက်တစ်စိတ်လောက် ထည့်လိုက်စမ်းပါ သံပုရာသီး
မနေ့ညက များသွားခဲ့တာ ခုထက်ထိမပြီး””
ဆိုတဲ့ Guitar Cafe ကိုပဲ ညည်းနေမှာလား.။
နှင်းမိုးဝေးး ကိုတတ် .. ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေအေ ..
ကန်စွန်းဥလေးးး ဘလော်ဂါကြီး ဦးတက်ရေ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ connection ကောင်းကောင်းနဲ့ blog လုပ်နိုင်သောblogger ကြီးဖြစ်ပါစေနော်..
ဆရာဒီဝိုင်းး စိုပြည်တဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျား...း)
မောင်ဥပေက္ခားး မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ..
သန့်သန့်းး ကိုတက်ကြီး.. မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ.. မွေးနေ့မဟုတ်လည်း ပျော်ရွှင်ပါစေ.. အို.. ပျော်ရွှင်ပါစေ..
ကိုနေမိုးးး ကောင်းသောမွေးနေသစ်ပါ ကိုတက်စ်လာ.....။
မျှားပြားး အရာရာ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေလို့ မွေးနေ့ မှာ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
မမေးး Happy belated birthday ပါ တက်စ် :) မွေးနေ့မှာရော နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဘလော့ဂါလောကမှာ 30+ နောက်တစ်ယောက်တိုးလာတာလဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ :D
မမီးး Happy Birthday! par Kotes Many happy may return.
ကိုသန့်ဇော်မင်းးး ကိုတက်ကြီးရေ.. happy birthday ပါဗျာ.. ဒီမွေးနေမှစလို့ ပျော်စရာအပေါင်း နှစ်ဆတိုးရရှိပါစေဗျာ..
SilverMoonးး မွေးနေဆုတောင်းနောက်ကျနေပြီး မြန်မြန်တောင်းမှ Happy Birthdayပါနော်...
ညီလေးဘလင့်းး အကိုကြီးတက် နဲနဲနောက်ကျသွားတယ် အကိုကြီးတက်ံHappy Birthday ပါ အကိုကြီး.
သဲလေးး ဦးတက်. happy birthday နော်..
ညီလေးစေတန်းး Happy Birthday ကိုတက်ကြီးရေ... နောက်တောင်ကျသွားတယ်.. စာမေးပွဲတွေ နဲ့ရှုပ်နေတာနဲ့..
မသဉ္စားး အိုး.. နှစ်ရက် ကျော်သွားပြီ။ wish လို့ ရသေးတယ်မလား။ HAPPY BIRTHDAY!!
မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်ကို
၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်. ပထမဦးဆုံး ဆုတောင်းတွေ အများဆုံးရဘူး သော မွေးနေ့ဖြစ်သွားပါတယ်..။ ကျနော့်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာများနှင့် ကျွှေးမွေးဧည့်ခံလိုက်ပါတယ်..။ စားနိုင်သလောက်စားသွားကြပါ….။
Posted by Tesla at 12:01 PM | Links to this post
-ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စစ်လိုတယ်ဆိုတဲ့ စကားတခွန်း
ဟိုး. ကမ္ဘာ့အစွန်ဆုံးကိုသွားရင် အရာဝတ္ထုတိုင်း ဇောက်ထိုးပြုတ်ကျသတဲ့..
-အလှအပကို ရှေ့ကကြည့်ပါ ဘေးကကြည့်ပါ
၃၆၀ ဒီဂရီ လှည့်ပတ်ကြည့်ပါ သရီး ဒိုင်မေးရှင်းနဲ့ကြည့်ပါ
ကဲဗျာ.. အက်တမ်တခုလိုပဲ တစစီကွဲအောင်
ခွဲ စိတ် ကြည့် ရှု မိ တယ် ဆို…..
ဘုရားသခင်က ကမ္ဘာကြီးကို ထုတ်လုပ်တယ်.
ဘက်ခမ်းတို့ ဘောလက်တို့ က ဘောလုံးအနုပညာကို…
ဘီယာတို့ ရှာရာပိုဗာတို့က သွေးခုန်နှုန်းတွေကို
ဘယ်စက်ရုံတွေက ထုတ်လုပ်လိုက်တာ.. ဘာတွေ??
ကဲ… ငါက.. ဘာများ ထုတ်လုပ်စရာလိုဦးမှာလည်း..
ငါ့ကို.. လောကကြီးထဲက ထုတ်နုတ်သွားပါလိမ့်မယ်….။
-ပေါက်လို့ပဲစား လျှောက်သွားနေတဲ့ အတွေးတွေကိုတော့ ထိမ်းကျောင်းရတာ မောတယ်ကွယ်။
-သူ့သမိုင်းကို လာလာဖတ်ကြတော့ နေရထိုင်ရ ကြပ်တယ်လို့
ခွာတပ်ပြီး ငါ့အပေါ်ကနေ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆိုင်းနင်းသွားကြစမ်း..။
အရာကျန်ခဲ့တာတွေနဲ့ အရူးဝါဒ လို့သာ တံဆိပ်ကပ်ခဲ့..။
ငါပဲ… စိတ်ချမ်းသာချင်ယောင်ဆောင်ပေးခဲ့ ရတယ်လေ..။
ဟော့ဟိုမှာ အရူးဝါဒကို ရိုက်ချိုး.. ဘို့
လေးရက် ဆယ့်တစ်နာရီ သုံးဆယ်မိနစ် နဲ့ စက္ကန့်ပေါင်း နှစ်ဆယ့်ကိုး…….လာပြီ။
Posted by Tesla at 10:15 AM | Links to this post
Why-do-we-blog? & Me..
စီမီနာ အကြောင်းတော့ တော်တော်များများ ရေးထားကြပြီမို့ မရေးတော့ပါဘူး..။ အမ် မရေးတော့ဘူး ဆိုပြီး အခုဘာလို့ရေးလဲ.? ဆိုတော့ကာ.. ကျနော် ခံစားမိခဲ့တာလေး တချို့ကို ရေးရင်း ဒီပွဲအတွက်လည်း အမှတ်တရပို့စ်လေး တခု ထားခဲ့ခြင်လို့ပါ..။
ပွဲမစခင်က. ဘယ်လိုမှ ဒီလောက်ထိ အောင်အောင်မြင်မြင် အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်လိမ့်မယ် လို့ မထင်ခဲ့မိပါဘူး.။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကျနော်တို့ တခါမှ မလုပ်ဘူးသေးတာရယ် အကြမ်းမြင်းခန့်မှန်းလို့တောင် မရနိုင်တဲ့ လူတွေပါဝင်မှုရယ် မိုးကလည်းရွာနေသေးတာရယ် ဆိုတာကြောင့်ပါ.။ တကယ်ကို အခန့်မသင့်ခြင်း တွေ မဖြစ်သလောက်နီးပါး အဆင်ပြေစွာ အောင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်..။
ပွဲအစကအဆုံးထိရောက်အောင်ကို ပျင်းရိသွားတဲ့ ပုံစံမျိုး မတွေ့ရပဲ စိတ်ပါဝင်စားစွာ နားထောင်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို မြင်ခဲ့ရတဲ့ အချက်အတွက်လည်း ၀မ်းသာမိတယ်..။
မယုံနိုင်လောက်အောင် အပြောကောင်းကြတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဘလော့ဂါ စပီကာများ အတွက်လည်း ပီတိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်..။
မြို့စားကြီးက ၅မိနစ်လောက်ပဲ စိတ်ကိုထိမ်းထားပြီး ပြောခဲ့ရတယ်. နောက်တော့ ပြောလိုက်တာများ ကရားရေလွတ် ဗျာ.. စီဗုံး စီဗုံး ဗုံး ဗုံး ဗုံး..... အဲ့လို အားရပါးရပြောတဲ့ နေရာရောက်တော့ ပရိတ်သတ်တွေလန့် ပြီး တွန့်တွန့်သွားတာတော့ တွေ့ရတယ်.။ :)
အဲ.. ဟိုးးး ဘက် တောင့်လေးနား ကပ်ပြီး စာအုပ်ကလေးကို ရင်ဘတ်ပေါ်ဖိပြီး မျက်နာငယ်လေးနဲ့ ရင်ခုန်နေရှာတဲ့ ဘာညာလေး ကိုတွေ့တော့ အဆင်များပြေပါ့မလားဟဲ့ ပေါ့လေ.. ဟိုက် ဆရာဟ.. ပြောတာများ လေးစားယူရပါတယ်.. ပီသပါပေတယ် Service + ရဲ့ ဆရာမ..။ ရှီးဖော...။
မမီကတော့ ပြောမနေတော့ ပါဘူး why-do-we-blog ရဲ့ ပို့စ်မှာတင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကို သာ ကြည့်လိုက် ပါတော့..။
မီမီတဲ့ဟေ့.. အို .. ဘာတဲ့တုန်း.. ဟေ့စ် ဟေ့စ်.. ဟုတ်ကဲ့ သူလည်း ဆရာမပါပဲ..။
စေတန်ဂေါ့ကတော့ ပရိတ်သတ်တွေ အာရုံပိုစိုက် ရအောင် ပြောသွားပါတယ်. မြန်လို့.. :) .. ပြောတာလည်း နည်းပညာ အကြောင်းဆိုတော့ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ပရိတ်သတ်များ ကျန်ခဲ့ပါတယ်.. ပရိတ်သတ်များကတော့ နားမလည်လည် လည်လည် သူပြောအပြီးမှာ လေးစားပြီး ကျန်ခဲ့တယ် ဆိုတာတော့ သိသာတယ်။ ညီလေးစေတန်ဂေါ့.. လေးစားပါတယ်။
အဲ ကိုမျက်လုံး ကြီးကတော့ ညက ဘာမှလည်းမပြီး ရေးထားတာတွေကလည်း Hardisk ပျက် သွားတယ် ဆိုတော့ အဆင်ပြေပါ့မလား လို့ အထင်မိခဲ့ဆုံးပါပဲ..။ လန်ထွက်ပါတယ်.. အပြောအကောင်းဆုံး လူတယောက်ပါပဲ. အေးဆေးစွာထဲက ပျင်းရိစွာ နားထောင်ရမဲ့ အချက်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဖယ်ထုတ်ပြီး ပြောသွားနိုင်ခဲ့တယ်..။
ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ ပါးနပ်စွာ ဖြေကြားခဲ့တဲ့ အဖြေတွေလည်း ပြောနေရော ဓါတ်ပုံတောင် ကျနော် မရိုက်ပဲ ထိုင်နားထောင်မိခဲ့ရတယ်..။
အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ တခြားဘလော့ဂါတွေကလည်း တက်တက်ကြွကြွ ညီညီညာညာနဲ့..
ဟိုး အဝေးကလူတွေကလည်း အင်တာနက်ထဲကနေ LIVE ခွန်အားတွေ ပေးနေလေရဲ့.......
အင်မတန် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသလို ပြန်စဉ်းစားတိုင်း ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်စေမဲ့ ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ခဲ့ပါတယ်..။
ဒီမှာ ဘလော့တခုအနေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားကြပါတယ်.. အခုတင်ထားတာ ဓါတ်ပုံတွေက 5% လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်. အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်..။
Posted by Tesla at 9:57 AM | Links to this post